हामीलाई तालीभन्दा पनि गालीको आबस्यकता छ - Tarun Khabar
तरुण खबर ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:४३
कोरोना अहिले गाउँघरमा भूसको आगोझैं सल्किरहेको अवस्था छ । पहिले यसको प्रभाव शहर केन्द्रित थियो । यो पटक गाउँघर पनि अछुतो रहन सकेन, गाउँका नागरिक पनि कोरोना संक्रमणले आक्रन्त छन् । जब राज्यले उपत्यकाका तीन जिल्लामा लकडाउनको तीन दिन अगाडि घोषणा गरेर तीन दिनपछाडि मात्रै निशेधाज्ञा जारी ग¥यो । त्यो चाहीं काठमाडौंलगायत उपत्यका खाली गर्ने नियत रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यो तीन दिनको बीचमा काठमाडौंलगायत उपत्यकामा बसोबास गर्ने धेरै नागरिकहरु गाउँगाउँ छिर्नुभएको छ । भारतलगायत तराई–मधेश क्षेत्रतिर बसोबास गर्ने पनि धेरै नागरिकहरु पहाडतिर उकालो लाग्नुभयो । त्यसकारण पहिलोको भन्दा बढी कोरोना अहिले गाउँघरमा फैलिएको छ ।
ंकच्ची सडकहरु दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका लगभग सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ । ंकच्ची भएपनि बाह्रै महिना सदरमुकामसम्म गाडी चल्ने केही सडकहरु छन् । त्यसकारण हामीले सुरुसुरुमा टोलटोलमा गएर एन्टीजेन परीक्षण ग¥यौं । त्यसपछि पुराना साबिकका घरघरमा गएर पनि हामीले परीक्षणहरु ग¥यौं । त्यसमा २५६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ९३ जना संक्रमितहरु भेटिनुभएको थियो । त्यसपछि हामीले १५० जनाको पीसीआर परीक्षण ग-यौं । त्यो पीसीआर परीक्षणबाट पनि ६७ जनालाई पोजेटिभ देखियो । त्यसरी पोजेटिभ देखिएका नागरिकहरुलाई सुरक्षित ढंगले होमआइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेका छौं । त्यो पनि उहाँहरुले हामी क्वारेन्टाइनमा होइन, आफ्नै घरमा बस्छौं भन्ने इच्छा देखाएपछि त्यो व्यवस्था मिलाएका हौं । त्यसरी होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरु गाह्रो भएपछि हामीलाई उहाँहरुले खबर गर्नुहुन्थ्यो । त्यो खबर आएपछि उहाँहरुलाई घरबाटै रेस्क्यु गरेर गाउँपालिकाले स्थापना गरेको अस्थायी कोभिड अस्पताल हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नं. १ एम्खामा छ । त्यो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं ।
संक्रमितहरुलाई आफैले बोकेर गाडीसम्म पु¥याउनुहुन्छ रोगको डर लागेन ?
डर लाग्यो वा लागेन भन्ने कुरा एकातिर रह्यो । तर, हामी जनप्रतिनिधिले यतिबेला घरभित्र बसेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न यो गर, त्यो गर भनेर आदेश गर्ने परिस्थिति छैन, होइन । यो बेलामा हामी आफै कमाण्डरको रुपमा बाहिर ननिस्किने हो भने यस क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको काम गर्ने मनोबल बढ्दैन । कोरनोबाट विश्व डराइरहेको बेलामा हामी नडराउने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, हामी जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला डराएर लुक्ने बेला होइन । हिजो चुनावका बेला नागरिकहरुलाई जस्तोसुकै समस्या पर्दा पनि हामी पछाडि हट्दैनौं भनेर जुन बाचा गरेका छौ, त्यसलाई इमानदारीताका साथ पूरा गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले डरका कारण कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन । नागरिकहरुलाई समस्या पर्दा काम गर्न नसक्ने हो भने राजनीति नगर्दा हुन्छ । होइन भने नागरिकहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न जस्तोसुकै बेलामा पनि डटेर काम गर्नुपर्छ, त्यो मात्रै इमानदार नेता हुन्छ ।
जनता चाहीं रोग र भोकले मरिरहेको बेला आफू घरभित्र बसेर रमिते बन्न सकिँदैन । त्यसैले म सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीसँगसँगै डटेर काम गरिरहेको छु । यस्तो बेलामा जनप्रतिनिधि रमिते भएर घरमा बस्ने हो भने सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीले किन काम गर्ने ? गाउँपालिका अध्यक्ष नै डराएर घरमा बस्ने हो भने मैले अह्राएको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी किन जाने ? उसले किन काम गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण यस्तो बेलामा म मात्रै होइन सबै जनप्रतिनिधिहरुले आफै अग्रपंतिमा गएर काम गर्नुपर्छ । अध्यक्ष नै डराइरहेको ठाउँमा एकजना डाक्टर र स्टाफ नर्स कसरी जान्छन् । यस्तो बेलामा पीपीई सेट लगाएर नेपाली सेनाले मृतकको दाह संस्कार गरिरहेको अवस्था छ ।
विकास निर्माणको कामबाट पनि हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । बरु हामी चाहीं हिजो भनेजति काम गर्न नपाएर असन्तुष्ट छौं । हामीले नागरिकसामु जति गछौं भनेका थियौं, त्यो परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन । नागरिकहरु चाहीं सन्तुष्टै हुनुहुन्छ । किन भने हिजो हामी निर्वाचित भएर आउँदा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका कस्तो थियो ? आज कस्तो भएको छ भन्ने कुरा यहाँका नागरिकहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामी निर्वाचित भएर आएकोदेखि विकास निर्माणका धेरै काम भएका छन् । यो हामी जनप्रतिनिधिलाई भन्दा पनि जनतालाई सोध्दा राम्रो हुन्छ । हामी निर्वाचन जितेर आउँदा वर्षाको समयमा एउटा ठाउँबाट अर्को गाउँमा जाने अवस्था थिएन । त्यस्ता खोलाहरुमा आज हामीले पुल निर्माण गरिसकेका छौं । कच्ची सडकहरु पनि प्रायः सबै गाउँटोलहरुमा पु-याइसकेका छौं । घरघरमा पु¥याउने अवस्था हुँदैन । गाउँको प्रत्येक वस्ती र टोलमा सडक पुगिसकेको अवस्था छ । खानेपानीको समस्या पनि हल गरिसकेको अवस्था छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भएका छन् । त्यसकारण नागरिकहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । काम गर्दै जाँदा केही सन्तुष्टी त भइहाल्छ ।